तीन महिना भित्र पोखरामा २० हजार सिट क्षमताको प्यारापिट सहितको फुटवल स्टेडिएम निर्माण हुन्छः शिलवाल – Online Annapurna
तीन महिना भित्र पोखरामा २० हजार सिट क्षमताको प्यारापिट सहितको फुटवल स्टेडिएम निर्माण हुन्छः शिलवाल
२ चैत्र २०७६, आईतवार १५:५४ March 15, 2020 96 Views
दीननाथ बराल पोखरा २, चैत
गण्डकी प्रदेशमा आगामी फागुन महिनामा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि करिब ७५ करोड देखि एक अर्ब बजेट माग गरिने भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार शिलवालले बताए । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य सचिव शिलवालले पहिलो चरणमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको लागि र दोश्रो चरणमा खेल सामाग्रि तथा खेलकुद गतिविधिका लागि उक्त बजेट माग गरिने भएको बताउका हुन्।
१३ औं सागमा पोखरामा विनियोजन गरेको भन्दा करिब ७ करोड ८३ लाख बढी खर्च गरेको बताउदै उनले नवौं खेलकुद लक्षित गरी पोखरा रंगशालमा हिटिङ सिस्टमको सुइमिङ पुल निर्माण हुने बताए । उनका अनुसार २५ वाई २५ मिटरको पौडी पोखरीसंगै पोखरामा सुटिङको पनि ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना हुने भएको छ । पोखरामा अन्तरािष्ट्रय सुइमिङ प्रतियोगिताहरु सवै मौसममा गर्न पनि उक्त सुइमिङ पुल आवश्यक भएको उनले बताए । नवौं खेलकुदमा हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक खेल हुने गरी आफुहरुले जिल्लामा सम्भावनाको खोजी गरि राखेको सदस्य सचिव शिलवालले जनाए ।
आगामी तीन महिनामा पोखरा रंगशालमा २० हजार सिट क्षमताको प्यारापिट सहितको अन्तराष्ट्रिय फुटवल रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उनले जनाए । सदस्य सचिव शिलवालले १६ हजार ५ सयको सिट क्षमतामा पुनः ३ हजार ५ सय सिट थप गरी आगामी तीन महिना भित्र २० हजार सिट क्षमताको प्यारापिट सहितको फुटवल स्टेडिएम निर्माण गर्ने बताएका हुन्।
१ अर्ब २८ करोडको लागतमा हाल पोखरामा निर्माणाधिन अबस्थामा रहेको पोखरा फुटवल स्टेडिएमा ३ हजार ५ सय सिट क्षमता बढाउदा करिब १५ प्रतिशत अर्थात २० करोड बढी बजेट लाग्ने भएको उनले बताए । उनले भने “ हामीले पूर्वपट्टिको प्यारापिट तर्फ आर्सिसि स्टक्चरमा थप प्यारापिट निर्माण गर्ने भएका हौं ।” पोखरा रंगशालमा हाल प्रयोग भएको स्टील स्टक्चर उच्च गुणस्तरको भएकोले सिटमा न्यूनतम १० बर्ष अन्यमा ५० बर्षसम्म टिक्ने उनले दाबी गरे । नेपालगन्जमा निर्माण भएको स्टील स्टक्चर भन्दा केही गुणस्तरको पोखरा रंगशालामा निर्माण भएकोले उनले दाबी गरे । पोखरामा राति पनि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु संचालनको लागि फ्लट लाइट र स्कोर वोर्डको ब्याबस्थापन गर्ने सदस्य सचिव शिलवालले बताए । आगामी बर्षको लागि उक्त योजना पार्नको लागि १५ करोडको बजेट सहितको प्रस्ताव पेश गरिएको उनले जनाए ।
कोरोना भाइरसका कारण हाल जारी रहेका केही प्रतियोगिहरु बाहेक अन्य कुनै पनि खेल गतिविधि हाल अर्को सुचना नआउदा सम्म स्थगित गरिएको उनले प्रष्ट पारे । विश्वमा कोरोना भाइरस फैलि राखेको अबस्थामा नेपाल पनि कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेकोले उक्त निर्णय गरिएको सदस्य सचिव शिलवालले बताए । कोरोना भाइरसको कारण केही विदेशी कामदार पोखरा आउन र केही सामान ल्याउन कठिनाई हुन सक्ने पोखरा फुटवल स्टेडिएम निर्माण कम्पनी भारतीय कम्पनी ग्रेट स्पोर्टस एण्ड एम.ए. कन्ट्रक्सन जावलाखेल ललितपुर ( जे.भी. ) का प्रोजेक्ट म्यानेजर दीपक बरालले बताए । आगामी एक महिना भित्र पोखरा महानगरपालिका र केही संस्थाको सहयोगमा पोखरा रंगशालमा फुटवल प्रशिक्षण मैदान समेत तयार पारिने भएको राखेपका सदस्य राजेश कुमार गुरुङले बताए । मंच गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।